Football Khabar » को बन्ला बार्सिलोनामा मेस्सीको उत्तराधिकारी ?
को बन्ला बार्सिलोनामा मेस्सीको उत्तराधिकारी ?
स्पेनिस बार्सिलोनामा सामान्यतः स्टार फरवार्ड लिओनल मेस्सीलाई कुनै खेलाडीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार्न कठिन हुन्छ । अझ बार्सिलोना त्यसमा पनि खास गरी मेस्सीका करोडौं समर्थक त यो कुरा मान्दै मान्दैनन् ।
हुन पनि हो– बार्सिलोनाको सिनियर टोलीसँग १५ वर्षे करिअर बिताउँदै गरेका मेस्सीले आजसम्म जे–जति गरेका छन्, त्यो सायदै कुनै खेलाडीले गर्ला । समकालीन फुटबलमा बार्सिलोना गएर मेस्सीको स्तरबाट प्रदर्शन गर्न सक्ने कोही खेलाडी देखिँदैन । यो कुरा क्लब बार्सिलोना र मेस्सीका फ्यानहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
तर, अर्जेन्टिनी मेस्सी चाँडै ३२ वर्षका हुँदैछन् । उनले सक्रिय रूपमा फुटबल खेल्न सक्ने उमेर अब धेरै छैन । बढीमा ३ वर्ष उनले बार्सिलोनाबाट खेल्न सक्छन् । त्यसपछि उनी आफैं आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीबाट पछि हट्छन् वा क्लब छाड्छन् ।
यही अवस्था ख्याल गर्दै बार्सिलोनाका लिजेन्ड रिभाल्डोले बार्सिलोनाले मेस्सीको उत्तराधिकारी खेलाडी भित्र्याउन वा खोजी गर्न ढिलाइ गरिरहेको बताएका छन् । ब्राजिलियन रिभाल्डोले मेस्सीको बढ्दो उमेरलाई ख्याल गर्दै क्लबले चाँडै मेस्सीकै जस्तो क्षमतावान् खेलाडी भित्र्याउन तयारी थाल्नुपर्ने बताए ।
अघिल्लो दिन ‘बेटफेयर’सँग कुरा गर्दै रिभाल्डोले बार्सिलोनाका लागि अहिले दुई विकल्प खुला रहेको पनि बताए । उनले बार्सिलोनाले आफ्ना पूर्वखेलाडी नेइमार वा फ्रेन्च खेलाडी केलियन एमबाप्पे भित्र्याएर मेस्सीको स्थान सुम्पिन सक्ने बताए ।
‘यदि नेइमारले बार्सिलोना छाडेका थिएनन भने उनी मेस्सीको उत्तराधिकारी बन्नेमा शंका थिएन । उनले मेस्सीकै जस्तो क्लबलाई योगदान दिन नसके पनि धेरै हदसम्म गर्न सक्थे,’ रिभाल्डोले भने ।
तर, अब बार्सिलोनाले नेइमार फर्काउने सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए । ‘यदि बार्सिलोनाले अहिले पनि नेइमार भित्र्यायो भने कम्तीमा ६ वर्ष टिम सुरक्षित हुन्छ । तर, नेइमार पुनः बार्सिलोना फर्किन म कठिन देख्छु ।’
रिभाल्डोले बार्सिलोनाका लागि सबै हिसाबले उचित विकल्प भनेको एमबाप्पे रहेको बताए । ‘उनी भर्खर २० वर्षका छन् । यदि समकालीन फुटबलमा बार्सिलोनालाई मेस्सीको अभाव हुन नदिने कोही खेलाडी छन् भने उनी एमबाप्पे मात्रै हुन्,’ रिभाल्डोले भने, ‘उनले यहाँसम्म आउँदा जे जति गरेका छन्, त्यो मेस्सीले आफू २० वर्षको हुँदा गरेभन्दा दोब्बरले बढी हो ।’
रिभाल्डोले अघि थपे, ‘एमबाप्पे भित्र्याउन बार्सिलोनालाई कुनै बाधा पनि छैन । तर, तत्कालै यसतर्फ नसोचे पछि सम्भव छैन । यदि एमबाप्पे भित्र्याउन सकियो भने बार्सिलोनालाई १५ वर्ष ढुक्क हुन्छ ।’
अर्को प्रसंगमा रिभाल्डोले रियल मड्रिडले नेइमार र एमबाप्पेध्ये एक खेलाडी भित्र्याउन चाहेको पनि बताए । ‘मैले बुझेसम्म रियलको प्राथमिकतामा नेइमार छन् । यदि नेइमार भित्र्याउन अनुकूल नभए एमबाप्पे दोस्रो विकल्प हुन्,’ रिभाल्डोले भने, ‘रियलले यी दुईमध्ये एक भित्र्याउँछ ।’
प्रकाशित मिति १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०६:५४